Sawir la soo xaday oo muujinaya lambarka uu Aaron Wan-Bissaka u xiran doono kooxda Manchester United – Gool FM
Sawir la soo xaday oo muujinaya lambarka uu Aaron Wan-Bissaka u xiran doono kooxda Manchester United
(Manchester) 28 Juunyo 2019. Waxaa la ogaaday lambarka uu kooxda Manchester United u xiran doono xilli ciyaareedka soo socda saxiixa cusub ee naadigaas ee Aaron Wan-Bissaka, inkastoo aan weli si rasmi ah loo soo bandhigin.
Aaron Wan-Bissaka ayaa u xiran doona kooxda Manchester United lambarka 29-aad marka uu dhameystiro heshiiska 50-ka milyan ee gini ah oo uu uga soo wareegayo naadiga Crystal Palace.
Sawirkan la soo xaday ee lagu shaaciyey baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka ayaa muujinayana Aaron Wan-Bissaka oo sare u haya maaliyadda kooxda Manchester United oo uu ku daabacan yahay magaciisa iyo lambarka 29-aad, iyadoo ay ku xoonsan yihiin qaar ka mid ah qoyskiisa.
Aaron Wan-Bissaka ayaa shalay ka gudbisay tijaabada caafimaad ee uu kooxda Manchester United ugu maray xerada tababarka ee Carrington.
Waxa uu noqonayaa daafaca garabka ka ciyaara ee ugu qaalisan kubadda cagta, waxaana lambarkan cusub ee 29-aad oo uu u xiran doono Man United xilli ciyaareedka soo socda horay ugu soo xirtay kooxda 20-ka goor ku guuleysata horyaalka Ingiriiska laacibka ay Wan-Bissaka ka wada tirsanaayeen Crystal Palace ee Wilfried Zaha waagii uu joogay Old Traffrod.
Difaacan reer England ee 21-sano jirka ah ayaa noqonaya saxiixii labaad ee ay sameyso kooxda uu hoggaamiyo Macallin Ole Gunnar Solskjaer xagaagan kaddib markii ay naadiga Swansea City kala soo wareegeen da’yarka Daniel James.
Waxaa la filayaa in Aaron Wan-Bissaka ay kooxda Manchester United si rasmi ah u soo bandhigto saacadaha soo aaddan.
Xulka Argentina oo iska xaadiriyey afar dhammaadka Copa America 2019 kaddib markii ay garaaceen Venezuela… + SAWIRRO
Xulka qaranka South Africa oo guul kaga gaaray Namibia kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019